Samsung uveza TV 105in UHD bent in the run up to CES - Izindaba Rule
Samsung uveza TV 105in UHD bent in the run up to CES
Korean hardware izicathulo Samsung limemezele it bazosungula lokho othi nguye “emhlabeni wokuqala” 105e definition ultra-high (UHD) banana TV kwesikrini nganoma CES 2014 e Las Vegas ngenyanga ezayo.
banana TV Samsung sika 105in iwukuba cishe ungalokothi ukufinyelela UK ngasosebeni lwale
Izindaba ezinhle kulabo ukuthi azithande bent, njengoba Samsung touts lokhu kuboniswa aweve obujwayelekile njengoba “wezwe lwalugobile kakhulu” TV, ewunika cishe izikhathi ezimbili izinga umfanekiso standard flat-panel UHD lishona lapho libhekwa ohlangothini. I bit ahlotshiswe of kit Inesibonakude i 11 million kwe-pixel (5120×2160) nesinqumo nge 21:9 aspect ratio.
“The Samsung 105in Lwalugobile UHD TV antjintje entsha nokuphathelene isithombe izinga algorithm eletha umbala ubuhle futhi umuzwa mkhulu nokujula,” Samsung waqhosha.
I 105-incher uye futhi lwakhiwe nge Samsung sika “Quadmatic Isithombe Engine” ubuchwepheshe, okuyinto ngokuqinile Korean uthi azikhulule konke okuqukethwe ikhwalithi yesithombe UHD-level kungakhathaliseki ukuthi yini umthombo.
“Njengoba iphaneli lwalugobile ibuyekeziwe futhi TV wesifunda nobuchwepheshe yengeziwe, inhlanganisela upgraded iphaneli nge okukhulu ikhwalithi yesithombe injini inikeza wokugcina Okwenzeka ogxile,” inkampani wanezela.
Njengoba uzowathola okulindele i kancane enjalo azitholakali of tech njengoba lokhu, Samsung engazange okwamanje zikhona izindaba mayelana zamanani noma ukutholakala ngoba lwalugobile TV set. Njengoba kuvamisile namadivayisi eziwubukhazikhazi kwalesi sigaba, kungase kube ukuthi TV oluqalisa eNingizimu Korea esikhathini 2014, kodwa ayifiki ezingwini angaphandle.
Noma kunjalo, Kuyoba ukubonisa at CES kusuka 7-10 January labo lucky ngokwanele ukuba ukuya
27500	0 CES, obuzayo, International CES, LG Corp., Samsung, Ithelevishini, UHD, Ultra definition high ithelevishini
← 'Isikhathi afe,’ clock utshele esibhedlela Top 10 Healthy Food inhlanganisela →